Otu esi emepe faịlụ .xml | Nzukọ mkpanaka
Etu esi emepe faili .xml
Ignacio Sala | 21/09/2021 22:00 | Nkuzi
Na Mobile Mobile anyị ebipụtala ọtụtụ akụkọ ebe anyị na -akọwa ihe faịlụ bụ .DLL, .JSON, .RAR, .MSG, .BIN… N'isiokwu a, anyị ga -elekwasị anya n'igosi otu esi emeghe faịlụ .xml, usoro a na -ejikarị eme ihe karịa ka ị nwere ike iche na mbụ.
Ma ị na -arụ ọrụ n'ọfịs ma ọ bụ na -achọgharị ịntanetị, ọ yikarịrị ka ị hụla faịlụ n'ụdị .xml, usoro, n'ụzọ megidere ihe ị nwere ike iche, juru ebe niile yana dakọtara na ọnụ ọgụgụ buru ibu. ngwa, gụnyere ihe nchọgharị weebụ. Mana Kedu ihe bụ faịlụ .xml?
1 Kedu faịlụ .xml
2 Otu esi emepụta faịlụ .xml
3 Otu esi emepe faịlụ .xml na PC / Mac
4 Otu esi emepe faịlụ .xml na gam akporo
5 Otu esi emepe faịlụ .xml na iPhone
6 Otu esi emepe faịlụ .xml na -enweghị ngwa
Kedu faịlụ .xml
N'ihi ndọtị faịlụ, sistemụ arụmọrụ na -enwe ike ịmata nke ngwa nwere ike mepee faịlụ. Mgbe ejikọtara faịlụ ndị ahụ na ngwa a kapịrị ọnụ, a naghị egosipụta ndọtị faịlụ ndị a n'ihi na ọ dịghị mkpa ịmara ngwa anyị nwere ike iji mepee ya, ebe egosiri ya na akara faịlụ.
Agbanyeghị, mgbe sistemụ arụmọrụ anaghị amata ndọtị, ma ọ bụ na -egosipụta akara ngosi efu ma ọ bụ gosipụta akara ajụjụ. Dabere n'ụdị ngwa ị wụnye na kọmpụta gị, ọ ga -ekwe omume na mgbakwunye a jikọtara ya na ngwa, n'agbanyeghị na ọ bụghị naanị na -eji otu ngwa mepee ya, dị ka ọ nwere ike ịdị n'ụdị usoro .psd nke Photoshop. Ọkpụkpọ .xml bụ nke World Wide Web Consortium mepụtara.
Faịlụ nwere ndọtị .xml bụ faịlụ, gbaghaara nchigharị, nke na -eji asụsụ akara akara nke mejupụtara faịlụ ederede dị larịị nke ị na -eji iji eriri eriri ma ọ bụ ihe nrịbama kọwaa usoro ahụ. A na -eji usoro a kọwaa syntax na koodu nke ngwa nwere ike ịgụ.
Asụsụ akara kacha ewu ewu bụ .html, ejiri ya mee ihe ngbanwe nke ibe weebụ, asụsụ na -eji akara akara akara nke na -akọwa usoro nke gosipụtara ọdịnaya nke ibe weebụ. Agbanyeghị, enwere otu akụkụ nke na -eme ka ha dị iche.
Mgbe.xml dị njikere, enweghị asụsụ akara akara na mbụ ebe ọ na -enye ohere ka ndị ọrụ wepụta akara akara dị ka ụdị ọdịnaya si dị, faịlụ .html enweghị ike ịpụ na koodu nke etinyere.
Ekele maka ntụgharị ya, usoro a anyị nwere ike ịchọta ya n'ọtụtụ ngwa imepụta akara ederede nke na -enye gị ohere ịmepụta usoro data. X nke Office ndọtị sitere na 2007 gaa n'ihu, na -abịa kpọmkwem site na nke a .xml.
Otu esi emepụta faịlụ .xml
Ọ bụrụ na anyị chọrọ mepụta faịlụ na usoro .xml Iji tinye data na igwe, anyị nwere ike iji editọ ederede ọ bụla, kewaa data na commas na / ma ọ bụ ihe ndị ọzọ wee chekwaa dọkụmentị ahụ ka ederede dị larịị yana ndọtị .xml.
Ọ bụrụ na ọnụọgụ data buru oke ibu, dị ka ọdụ data ma ọ bụ akwụkwọ mgbasa ozi, site na ngwa ebe data dị, anyị nwere ikexport faịlụ na usoro .xml site na Save dị ka nhọrọ dị na Excel.
Mgbe ị na -echekwa faịlụ ahụ, ngwa ahụ ga -ewepụta faịlụ ederede dị larịị, na -ekewa mpaghara / ndekọ site na akara. Usoro a anyị nwere ike ime ya naanị na kọmpụta, ebe ọ bụ na nsụgharị mkpanaka nke akwụkwọ mgbasa ozi na -enye anyị ohere ịchekwa faịlụ n'ụdị ngwa.
Otu esi emepe faịlụ .xml na PC / Mac
Dịka m kwuru n'elu, faịlụ dị n'ụdị .xml bụ faịlụ ederede doro anya, yabụ na -akwado ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa na igwe na -enye ha ohere ịkọwa data siri ike.
Na Windows, anyị nwere ike jiri ngwa mepee faịlụ n'ụdị .xml Mbadamba ihe. Mgbe ị na -emepe faịlụ na notepad, a ga -egosipụta ederede iche site na commas (n'ọtụtụ oge). Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịrụ ọrụ na data dị n'ime faịlụ n'ụdị .xml anyị ga -eji akwụkwọ mgbasa ozi.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ mepụta ihe nzacha, dozie ma ọ bụ kewaa ọdịnaya dị n'ime faịlụ n'ụdị .xml anyị ga -ebubata faịlụ ahụ na akwụkwọ mgbasa ozi, ka ị nwere ike Excel, n'agbanyeghị na anyị nwekwara ike iji ya mee ya FreeOffice enweghị nsogbu ọ bụla.
Mgbe emepere site na ngwa ndị a, a ga -ekesa ederede nke kewara site na kọlụm, nke na -enye anyị ohere ịrụ ọrụ n'ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe. karịa iji faịlụ ederede dị larịị na nchịkọta akụkọ ọ bụla.
Otu esi emepe faịlụ .xml na gam akporo
Faịlụ .xml bụ faịlụ ederede dị larịị, ya bụ, ha anaghị etinye usoro ọ bụla, karịa nke ndọtị chere. N'ụzọ dị otu a, ọ bụrụ na anyị chọrọ imepe faịlụ n'ụdị a na ngwaọrụ gam akporo, anyị ga -eji nke ọ bụla ngwa na -enye anyị ohere imepe akwụkwọ ederede.
Ọ bụrụ na anyị nwere ngwa maka mepee ma rụọ ọrụ na akwụkwọ mgbasa oziAnyị nwekwara ike iji ya, n'agbanyeghị na taa, ngwa mkpanaka pere mpe na -enye anyị ohere ibubata faịlụ n'ụdị ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ịnweghị onye editọ ederede ma ọ bụ ngwa akwụkwọ mgbasa ozi, ị nwere ike iji ihe nchọgharị weebụ mgbe niile.
Na Storelọ Ahịa Play anyị nwere ọtụtụ ngwa kpamkpam n'efu nke ahụ na -enye anyị ohere ịhụ faịlụ n'ụdị .xml mana ọ bụghị dezie ọdịnaya ha ma ọ bụrụ na -edegharị ya na ngwa ndị ọzọ.
Onye na -ekiri XML - Onye na -agụ na onye na -emepe emepe
Otu esi emepe faịlụ .xml na iPhone
Dị ka ọ dị na gam akporo, ọ bụrụ na anyị chọrọ imepe faịlụ .xml na iPhone, anyị ga -eji ngwa nke na -enye anyị ohere imepe faịlụ ederede, nwere ma ọ bụ enweghị usoro, dị ka Ibe, onye editọ ederede n'efu na Storelọ Ahịa Ngwa.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ igosi ederede etinyere na faịlụ .xml kewara n'ime ogidi, anyị ga -eji ngwa ahụ Nọmba, Apple's Excel nke dịkwa maka nbudata kpamkpam n'efu maka ndị ọrụ niile nwere akaụntụ Apple.
Nhọrọ ọzọ iji mepee faịlụ .xml na iPhone bụ iji otu dị iche iche ngwa efu dakọtara na usoro a nke anyị nwere na Storelọ Ahịa Ngwa, n'agbanyeghị na anyị ga -enwe ike ịhụ ọdịnaya mana anyị agaghị edezi ya.
Otu esi emepe faịlụ .xml na -enweghị ngwa
Sistemụ arụmọrụ mkpanaka desktọọpụ ọ bụla gụnyere ihe nchọgharị ịntanetị. Ụdị .xml dakọtara na nke ọ bụla n'ime ihe nchọgharị ịntanetị dị taa na obuna onye kacha okenye, ebe usoro a abụghị nke ọhụrụ, mana ọ nọnyeere anyị ihe karịrị afọ 20.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nkuzi » Etu esi emepe faili .xml
Otu esi edozi njehie ahụmịhe Geforce 0x0003
Otu esi enyere mkpakọ faịlụ na folda aka na Windows